राजवल्लभले बचाए हिरोइनलाई ! ~ The Nepal Romania
राजवल्लभले बचाए हिरोइनलाई !
सुटिङ्का क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको चलचित्र 'प्रीतिको फूल' का नायक अर्जुन (राजबल्लभ कोइराला) शनिबार साँझसम्म पोखराको हिमालयन गल्फ कोस्रमा असिनपसिन भेटिए । कारण -नायिका यूना उप्रेतीसँग हेलिकोप्टरमा सवार उनले मायालु गौरी (गरिमा पन्त) लाई आत्महत्या गर्नबाट बचाउनु रहेछ । उक्त दृश्य क्यामरामा कैद गर्न ३ बजे देखिनै सुटिङस्थल हिमालयन गल्फ कोस्रमा फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर एनवान-एआईडब्लु ल्यान्ड भयो ।दुई घण्टासम्म क्याप्टेन सिद्धार्थ गौतमले दृश्य छायाँकनका लागि सेतीनदी किनारको खोंच, नजिकै लेखनाथको रिट्ठेपानी तथा गल्फ कोस्रमा कुशलतापूर्वक हेलिकोप्टर उडाए । प्रतिघण्टा एकहजार डलर खर्चिएर सुटिङका लागि झिकाइएको सो हेलिकोप्टरबाट कैयौपटक नायक कोइराला, नायिका पन्त र उप्रेती उड्ने र हाम फाल्ने काम गरे ।तीन कलाकारले स्टन्ट गर्दा नौलो अनुभव भएको बताए । ३० फिटमाथिबाट नायिका पन्त हेलिकोप्टरमा झुण्डिएर दिएको सटले सुटिङ हेर्न पुगेका सर्वसाधारणले डराएर जिब्रो टोके ।'निकै डर लाग्यो;पहिलोपटक भएर पनि होला'-नायिका पन्तले मेरोसिनेमासँग भनिन -'जेहोस् सबैको सपोर्टले राम्रो भयो ।' नायिका यूनाले पनि नौलो अनुभव साट्दै भनिन् 'सट एक्साइटेड थियो ।' हेलिकोप्टरको प्रयोग भएको चलचित्र 'पहिलो पहिलो माया'मा पनि सामान्य खालको सुटिङ भ्याएका राजबल्लभले स्टन्टलाई रिस्क र चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिकि्रया दिए । यसखालको सटका लागि धेरै तयारी हुनुपर्ने उनले जनाए ।
पर्खिबसे, पहिलो पहिलो मायापछि राजबल्लभको भेट यूनासँग तेस्रो पटक हो भने गरिमासँग उनले यसअघि सम्झना, किन लाग्छ माया र फूल गरिसकेका छन् । गोपीकृष्ण मूभिजको 'खुशी' प्रदर्शन भैरहेको बेला पोखरा र आसपासमा हप्तायता धमाधम सुटिङ भैरहेको चलचित्र 'प्रीतिको फूल' त्रिकोणात्मक चलचित्र हो भन्छन् निर्देशक रेशराज आचार्य । 'प्रीतिको फूल अरु फूलजस्तो हैन; यो फूल न त झर्छ न त ओइलाउँछ' उनले भने ।चलचित्रमा गाउँकी मायालु गौरीसँग मायासँगै अर्जुन (राजबल्लभ) गायक बन्ने धुनमा सहर छिर्छन् । फ्यानको रुपमा चलचित्रकी नायिका युनासँग भेट्ने रहर उनमा लाग्छ । सो क्रममा युनाले अर्जुनलाई प्रेम गर्छिन् । युनाको वान साइडेड लभ भए पनि दुबैबीच प्रेम रहेको थाहा पाएपछि गाउँकी मायालु गौरी बिक्षिप्त हुन्छिन् । उनी आत्महत्या रोज्ने निर्णयसँगै भिरमा पुगेको बेला उनको रेस्क्यू अर्जुनबाटै हुन्छ । सोही दृश्य कैद गर्नका लागि सुटिङ् यूनिट मध्यान्ह नहुँदै पोखराबजारबाट झण्डै १० किलोमिटर दक्षिण-पूर्वी हिमालयन गल्फ कोस्र पुगेको हो ।टुहुरो, धर्मसँकट, बन्धन, माटो बोल्छ, अनमोललगायतका चलचित्रमा निर्देशकीय क्षमता देखाइसकेका आचार्यले यो चलचित्रबाट आफू आशावादी भएको प्रतिक्रीया दिए । उनका अनुसार काठमाडौ र पोखरामा गरी चलचित्रको झण्डै ७० प्रतिशत सुटिङ सम्पन्न भैसकेको छ । बाँकी छायाँकन पोखरामा सक्ने गरी यो यूनिट यही पुस १५ गतेसम्म पोखरा र आसपासमा सुटिङमा ब्यस्त रहने जनायो । निरक पौडेल कार्यकारी निर्देशक रहेको चलचित्रमा नीकिता र निरज पौडेल निर्माता हुन् भने ताराप्रकाश लिम्बुको संगीत छ ।
रमितलाई लिनुको राज खुल्यो
पहिलो पटक स्वर
सन्चिता लुइँटेलको खबर
मुन्नी अब लडाकु !
नम्बर वान हिरो को ?
हिन्दी हटाएर नेपाली सिनेमा
एकैपटक चार सिनेमा
माटो कस्तो होला ?
नायिका नयाँ कथा पुरानै
दार्जिलिङ र सिक्किममा पनि 'धर्मा'
झरनाले छाडिन् सिनेमा